Ku Kordhi Hababka Ugu Wanaagsan Kooxdaada 8-daan Aaladood ee Isgaadhsiinta Gudaha | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Ku Kordhi Hababka Ugu Wanaagsan Kooxdaada 8-daan Aaladood ee Isgaadhsiinta Gudaha
Astaantaada ayaa kaliya sida ay u guulaysan karto marka kooxdaadu ay leedahay isgaarsiin aan fiicneyn.
Iyadoo ay adkaan karto in la go'aamiyo hababka ugu fiican ee kooxdaada, uma baahna inay adagtahay in la doorto qalabka isgaarsiinta gudaha ee ugu fiican. Sida qalabku u wanagsan yahay, waa u fududahay qof walba inuu shaqada ku qabto waqtigii loogu talagalay.
Maqaalkani waxa uu dabooli doonaa qaar ka mid ah qalabka isgaarsiinta gudaha ee ugu wanaagsan ee laga heli karo suuqa.
Nooca qalabka: Fariimaha, Wadaagga Faylka, Maareynta Hawsha
Fleep, kooxdaadu waxay lahaan doontaa dhammaan xiriirinteeda iyo maaraynta hawsha hal madal.
Halkii aad u baahnaan lahayd inaad iimaylka midba midka kale hore iyo gadaal, waxaad si fudud u diri kartaa fariimaha. Waxaa jira xitaa doorashooyin si loo hubiyo in fariimaha sare si fudud loo heli karo.
Maareynta hawsha si cajiib ah ayaa looga dhigay Fleep. Hogaamiyayaasha kooxdu waxay meelayn karaan hawlo shaqaaluhuna waxay si sahal ah u gali karaan wakhtigooda, galalka, iyo wax ka badan.
Faylasha kooxda waxaa loo diyaarin karaa qof kasta ama kuwa mashruuca ku jira. Faallooyin kasta oo ku saabsan mashaariicda waa laga ilaaliyaa farriimaha ugu muhiimsan, si loo hubiyo in qof kastaa uu ku sii socdo jidka saxda ah.
$ 5 ee Ganacsiga
2. Rasuulkii Ciidanka
Nooca qalabka: Isgaarsiinta Iyo Iskaashiga
Si ka duwan qaar ka mid ah aaladaha isgaarsiinta gudaha ee u baahan isticmaaleyaasha inay ku xiraan xogtooda gaarka ah, Messenger Troop waxaa loogu talagalay kooxaha ganacsiga.
Tani waxay kaa caawinaysaa in la xaddido carqaladaha iyo in dhammaan shaqaaluhu ay diiradda saaraan hawsha ay gacanta ku hayaan.
Shaqaalaha iyo hogaamiyayaasha kooxdu waxay dejin karaan wicitaano muuqaal ah oo hal-hal ah, wicitaan kooxeed, iyo qolal-sheekeysi. Wadaagista shaashadda ayaa lagu fududeeyay goobtan dareenka leh. Intaa waxaa dheer, goobaha shaqaalaha waa la wadaagi karaa.
Weli waxaa ka sii wanaagsan, wadaagista faylka daruuraha ayaa laga heli karaa Troop Messenger. Madalku wuxuu si aan kala go 'lahayn ula midoobaa dhowr barnaamij oo faylal-wadaaga ah.
$2.50 ee Premium
$5 ee Ganacsiga
$9 ee Sare
Nooca qalabka: Shabakadda Bulshada ee Ganacsiga
Lagu dhisay mabaadi'da isgaarsiinta firfircoon, Yammer wuxuu u oggolaanayaa kooxaha inay si aan kala go 'lahayn ula xiriiraan iyaga oo aan ka bixin xafiiska 365 Suite.
Si la mid ah kooxaha, shaqaaluhu way la hadli karaan midba midka kale ama waxay qaban karaan wicitaano ballaaran oo waaxeed.
Yammer wuxuu u oggolaanayaa hoggaamiyeyaasha kooxda inay dhisaan bulshooyin. Tani waxay hubinaysaa in waaxaha la midka ah la isku daray, haddii qof kastaa u baahdo inuu midba midka kale la xiriiro. Kooxuhu si fudud ayay ula xidhiidhi karaan oo waxay ku siin karaan jawaab celin ku saabsan horumarka mashruuca hadda jira.
Qiimaha (Waxaa laga heli karaa Xafiiska 365 Qorshayaasha):
Xafiiska 365 Meherad: $8.25 isticmaale/bishii
Xafiiska 365 Qiimaha Ganacsiga: $12.50 isticmaale/bishii
Xafiiska 365 Aasaaska Ganacsiga $5.00 isticmaale/bishiiba
Nooca qalabka: Iskaashi ku salaysan daruuraha
Goobtan waxaa loogu talagalay iskaashiga daruuriga ah. Wadaagista dukumeentiyada, maaraynta socodka shaqada, fariimaha, wadaaga maktabadda, iyo inbadan ayaa dhamaantood lagu daray Bit.AI.
Calaamaduhu waxay xitaa soo dhejin karaan tilmaamahooda summadaha oo dhammaystiran iyo faylalka gaarka ah si loo hubiyo in kooxdu haysato faylasha saxda ah ee ay u baahan yihiin marka ay codsadaan macaamiisha, xarumaha cusub, iyo shirkadaha PR.
Bit.AI waxay si cajiib ah ula mid tahay Google Drive. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada waa Bit.AI waxay leedahay interface user nadiif ah.
Tani waxay hubinaysaa in shaqaaluhu ay diiradda saari karaan sida saxda ah waxay u baahan yihiin inay diiradda saaraan marka ay soo galaan goobta.
$8 ee Pro
$ 15 ee Ganacsiga
Nooca qalabka: Wadashaqeyn, Isgaarsiin, Cadeyn
ProofHub waxay meesha ka saaraysaa baahida loo qabo in lagu tiirsado dunta iimaylka dheer si loo dhamaystiro mashruuca. Waxa kale oo ay meesha ka saartaa in si macno darro ah loogu koobiyo iimaylada aan adiga khusayn.
Iyada oo la adeegsanayo ProofHub, doodo nadiif ah oo habaysan ayaa lagu horumarin karaa guul kasta oo mashruuca ah. Shakhsiyaadka shaqaalaha ah waa lagu calaamadin karaa si loo hubiyo in la ogeysiiyo faallooyinka.
Iyada oo la adeegsanayo ProofHub, hoggaamiyeyaasha kooxdu waxay kalsooni ku yeelan karaan maamulkooda socodka shaqada.
Sharaxado maareyn badan ayaa lagu soo daray ProofHub, kaas oo u oggolaanaya koox kasta inay raacdo horumarka mashruuca ee dhinaca muuqaalka taasoo macno ugu samaynaysa iyaga.
$45 ee Muhiimka ah
$89 ee Xakamaynta ugu dambaysa
Nooca qalabka: Isgaadhsiinta Muuqaalka Gudaha iyo Dibada
Soo-dhoweynta ayaa kor ugu kacday caan ka dib markii dhaqdhaqaaqa Shaqada Guriga uu bilaabmay cudurka faafa ee COVID-19.
Software-ka shirarka fiidyowga ah waxaa loo isticmaali karaa mareegta ama marka aad socoto. Kooxo badan, Zoom waxay u xaqiijisay in isgaarsiintu uu ahaado mid aan hagaagsanayn inta lagu jiro waqtiyada aan la hubin.
Soo-dhoweyntu waxay fududaynaysaa in 40 daqiiqo ama wax ka yar la waco dad badan.
Shaqaaluhu waxay ku biiri karaan shabakadda, app-ka, ama taleefan. Qof kastaa wuxuu awood u leeyahay inuu naftiisa aamusiyo, ku sheekeysto fariimaha, oo uu la wadaago faylasha kooxda oo dhan.
$149.90 ee Pro
$199.90 ee Ganacsiga
$300 oo ah ganacsiga Zoom United
Nooca qalabka: Sabuuradda cad ee dhijitaalka ah
Kooxaha qaar ayaa wali u baahan inay isticmaalaan sabuurad cad si ay u helaan isgaarsiin gudaha ah oo wax ku ool ah.
Si kastaba ha ahaatee, nooca casriga ah ee sabuuradda cad waa shiraac dhijitaal ah oo macmal ah oo laga heli karo gudaha Conceptboard.
Muuqaalkan dhijitaalka ah ee aan xadidnayn wuxuu u oggolaanayaa kooxaha inay ku shaqeeyaan fikrado fudud oo adag marka lagu daro wadaaga fikrado cusub.
Iyada oo la adeegsanayo Conceptboard, kooxuhu waxay ku wada xidhiidhi karaan hal qol ama adduunka oo dhan midba midka kale.
Looma baahna in laga werwero calaamadaha tirtirka qalalan ee dhammaanaya, iyo dhammaan macluumaadka lagu duubay Conceptboard isla markiiba waa la xoojiyaa.
Tani waxay ka dhigan tahay haddii kooxdu ay lumiso awoodda ama internetka, fikradahooda ayaa weli laga heli karaa internetka. Tani waxay sidoo kale hubineysaa in kooxuhu ay si fudud ula wadaagi karaan fikradaha xubnaha kale ee kooxaha iyo xitaa macaamiisha haddii loo baahdo.
$6 oo premium ah
$ 9.50 ee Ganacsiga
Nooca qalabka: Iskaashiga iyo Maareynta Mashruuca
Si ka duwan qaar ka mid ah qalabka isgaarsiinta gudaha, Airtable waxaa loogu talagalay in ay abuurto xiriir aan toos ahayn oo u dhexeeya kooxaha, waaxaha, iyo shirkadaha oo dhan.
Iyada oo la adeegsanayo Airtable, shaqaaluhu waxay si fudud u geli karaan waqtigooda shaqada oo ay geli karaan faylalka ay dhammaystireen. Goobtu waxay hubisaa in kooxuhu aanay u baahnayn inay u kala beddelaan abka badan si ay u dhammaystiraan waajibaadkooda isgaarsiinta.
Hogaamiyayaasha kooxdu waxay diirada saari karaan maaraynta hawsha iyo xaqiijinta in shaqada si sax ah loo dhamaystiray. Jawaab-celinta waxaa lagu habeeyaa faallooyinka ku saabsan foornada loo xilsaaray.
Intaa waxaa dheer, warbixinno ayaa la abuuri karaa si loo fahmo wax soo saarka shaqaalaha iyo isgaarsiinta.
Airtable waxaa loo isticmaali karaa kooxo gaar ah ama la isku daro si loo abuuro siyaasadaha isgaarsiinta ugu fiican ee shirkadda oo dhan.
$10 ee Plus
$20 ee Pro
Haddi kooxdaadu ay ka shaqaynayso xafiiska ama ay ka shaqaynayso guriga, qalabka isgaadhsiinta gudaha ayaa muhiim u ah ilaalinta wax soo saarka sanadka oo dhan.
Iyadoo aan loo eegin sida jawiga shaqadu u wareego, anaga agabka suuqgeynta iimaylka ugu fiican waxay kaa caawin kartaa adiga iyo kooxdaada inaad la socotaan mashaariicda. Qalabyadan, weligaa ma la yaabban tahay cidda ka shaqaynaysa dhinaca mashruuca mar labaad!
Kooxdaadu ma yihiin kuwo aan wax soo saar lahayn? Ku beddel kan 8-daan Aaladood ee Wax-soo-saarka ee ay adeegsadaan Summada Waaweyn